Stay at Home မှာ ဝိတ်တက်လာသူတွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလေးများ - Hello Sayarwon
Stay at Home မှာ ဝိတ်တက်လာသူတွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလေးများ
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 23/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ကြောက်လို့ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတာနဲ့ အပျင်းပြေ မုန့်တွေစားရင်း အထိုင်များရင်း စိတ်ဖိစီးရင်း ဝိတ်တွေ တက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင် ဝိတ်လည်း ကိုဗစ်ကို တွန်းလှန်ဖို့ ကိုယ်ခံအားလည်း ရစေဖို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလေးများ မလုပ်ချင်ဘူးလား။
ဒါဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ရင်း လေ့ကျင့်ခန်း တူတူလုပ်ရအောင်လား။ ကိုဗစ်ကိုလည်း ခုခံနိုင်မယ် Stay Home ပြီးရင်လည်း လှနေမယ်ဆို မ အိုကေဘူးလား…………
ကိုဗစ်ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းရင်း တက်လာတဲ့ ဝိတ်ကို လျှော့ချဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြစို့
ကိုဗစ်ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းရင်း ဝမလာစေဖို့ အခုလို လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
၁. Plank ထောက်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက ကြွက်သားတွေအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပေါ့။ ညီညာနေတဲ့ ကြမ်းပြင်တစ်ခုရှိရုံနဲ့တင်လုပ်လို့ရတဲ့ ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပါ။ လက်တွေခြေထောက်တွေနာမှာ စိုးရင်တော့ ယောဂဖျာလေးခင်းပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမှောက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ခြေဖျားနဲ့ တံတောင်ဆစ်ကို အားယူလို့ ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံးကို ကြမ်းပြင်ကနေလွတ်အောင်လုပ်ပေးပါ။ တစ်ခါကို ၅ စက္ကန့်လောက်ကြာအောင်လုပ်ပါ။ လုပ်နိုင်လာတာနဲ့အမျှ အချိန်နည်းနည်းချင်းတိုးပြီးလုပ်သွားပေးပါ။
၂. Squats ထိုင်ပါ
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ တင်ပါးကြွက်သားတွေကို သန်မာစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် Squats ထိုင်တဲ့အခါ ပုံစံမမှန်ရင် ဒူးနာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ပေါင်၊ခြေထောက်၊ဗိုက်နဲ့ တင်ပါးကြွက်သားတွေကို သန်မာဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်ကို ပခုံးအကျယ်အတိုင်းကားထားပေးပါ။ လက်တွေကို အရှေ့ဘက်ကို ဆန့်ထုတ်ပါ။ ဒူးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကွေးပါ။ တင်ပါးကို ၈ လက်မလောက်အောက်ဘက်ကိုနှိမ့်ပေးပါ။ ခါးမတ်မတ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ တစ်ခါထိုင်ရင် ၃ မိနစ်နှုန်းလောက်နဲ့ ၈ ကြိမ် ကနေ ၁၂ ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
လက်မောင်း၊ ပခုံး၊ ရင်ဘတ်၊တင်ပါး နဲ့ ခြေထောက်တွေကို သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအသုံးပြုရတဲ့ အားကစားတစ်မျိုးပေါ့။ ဒိုက်ထိုးတာကလည်း မြေပြင်ညီတစ်ခုရှိရင်ကို ပြည့်စုံနေပါပြီ။ ဒိုက်ထိုးတဲ့ခုံရှိရင် ပိုအဆင်ပြေပေမယ့် မရှိလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒိုက်ကို အပြည့်ထိုးလို့ရသလို ထိုင်ခုံပေါ်မှာလက်ထောက်ပြီး တဝက်ထိုးတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။
မြေပြင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်နဲ့ လက်ဖဝါးကို အားပြုလို့မှောက်လိုက်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်မျှတစေဖို့ ကျောပြင်ကို ဆန့်နေအောင်ထားဖို့လိုပါမယ်။ ခြေထောက် ၂ ချောင်းကို ၁ ပေခွာထားပေးပါ။ လက်တွေကို မြေပြင်ကနေ ၉၀ ဒီဂရီပုံစံကျအောင်ထောက်ထားပါ။ တတ်နိုင်သလောက် အကြိမ်ရေကို တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီး လေ့ကျင့်သွားပါ။
၄. Pull-Ups လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက နည်းနည်းလောက်ခက်ခဲပေမယ့် တော်တော်လေးတော့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ခိုလို့ကောင်းမယ့် တန်းတစ်တန်းတော့လိုပါမယ်။ နောက်ကျော၊လက်မောင်း နဲ့ လက်ဖျံတွေကို သန်စွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ လက်ကို ပခုံးအကျယ်အတိုင်းကားထားရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ တန်းကို လှမ်းဆွဲပြီးခန္ဓာကိုယ်ကို တောင့်နိုင်သမျှတောင့်ရင်း တန်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့အထိ ပင့်တင်ပါ။ ပြီးရင် ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ အပြင် အကြောလျှော့တာ၊ ဝိတ်တုံးလေးတွေ မတာ၊ အိမ်တွင်းမှာပဲ စက်ဘီးစီးတာ၊ အကြောလျှော့တာ၊ ခါးလှည့်တာတွေလည်း လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကဲ…ကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ရင်းလည်း ဝိတ်ချလို့ ရပါသေးတယ်။ မနက်တိုင်း နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရင်း ကိုဗစ်ကာလ Stay at homeကြောင့် တိုးလာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေကို လျှော့ချလိုက်ပါ။ ဝိတ်လည်းကျ၊ ကိုယ်ခံအားလည်းရ ညဘက်လည်း အိပ်ပျော်ဆိုတော့ အခုပဲ စလုပ်လိုက်တော့နော်။ သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတော့ ထိန်းထားပေးပါနော်။
သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ရှိလား သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ကိုယ်တိုင် တွက်ချက်ကြည့်လိုက်နော်။